बालबालिकाकाे दाँत किरा लाग्न नदिन अपनाउनुस् यस्ताे सावधानी - Health TV Online
बालबालिकाकाे दाँत किरा लाग्न नदिन अपनाउनुस् यस्ताे सावधानी
डा. अनारकली पिया श्रेष्ठ
व्यस्तताका कारण अचेल अभिभावकले बालबालिकालाई पर्याप्त समय दिन सकेका छैनन्। स्कुलमा टिफिन पठाउँदा होस् वा खाना खान नमानेको समयमा फकाउन गुलियो खानेकुरा दिइन्छ। साथै पाहुना लाग्दा होस् वा पाहुना भएर आफन्तको घरमा जाँदा गुलिया रंगीबिरंगी चकलेट दिने चलन छ। अत्यधिक गुलियोले शरीरका अन्य भागमा पुर्याउने असर त छँदैछ, अहिले मैले कुरा गर्न लागेको दाँतको सन्दर्भमा हो।
स्वभावैले केटाकेटी गुलियो पदार्थ धेरै मन पराउँछन्। केटाकेटीलाई फकाउने वा माया गर्ने निहुँमा प्रशस्त चकलेट दिन्छौँ तर कुल्ला गर्न वा दाँत माझ्न लगाउन भने बिर्सिन्छौँ। यसले उनीहरूको दाँत बिग्रिनसक्ने उच्च जोखिम हुन्छ। कतिपय आमाले राति दूध चुसाउँदा त्यसमा भएको गुलियो पदार्थले साना नानीको दाँत किराले खान सक्छ।
मानव शरीरमा दाँत पनि महत्त्वपूर्ण अंग हो। हामीले खाएको खानेकुरा दाँतले चपाएर पाचन प्रक्रियालाई मद्दत गर्छ। सुन्दरतामा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। यति महत्त्व बोकेको दाँत उमेर नै नपुगी खराब बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित होइन। तर हाम्रै लापरबाहीले बच्चाहरूको दाँत किराले खान्छ।
कसरी खान्छ किराले?
धेरै गुलियो खाएर कुल्ला नगर्दा वा उचित समयमा ब्रस नगर्दा दाँतको बिचमा अड्किएको खानेकुरा कुहिन्छ। फलस्वरूप किरा लाग्छ। खानेकुरा कुहिएर बनेकाे एसिडले दाँतकाे प्रकृति पनि बिगार्छ।
शुरुमा कालो खैरो धब्बा देखिन थाल्छ तर दुखाइ महशुस हुँदैन। केही समयपछि उनीहरूको दाँतमा खाल्टो बन्दै जान्छ र पछि गएर चिसो खादा डेन्टिङ एरियामा सिरिङ महशुस हुने समस्या देखिन्छ। बिस्तारै खाना चपाउँदा पनि दुखेको महसुस हुन्छ।
दाँतको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा पछि नसामा समेत असर हुन्छ। दाँतको जरामा पिप जम्न शुरु भएपछि मुख गिजा र गाला सुन्निने जस्तो समस्या सिर्जना हुन्छ। पिप जम्ने, रगत बग्ने र दाँत हल्लिने समस्या पनि हुन्छ। दाँतकै कारण जिब्रोको मुनिको भाग सुन्निन्छ। यो समस्यालाई समयमा ध्यान नदिँदा मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्छ।
सफाइमा बेवास्ता तथा अस्वस्थकर खानापानका कारण दाँत हल्लिएपछि निकाल्नेबाहेक अरु उपाय हुँदैन। हामीकहाँ साना बच्चाको दाँत ब्रस गर्नु हुन्न भन्ने बुझाइ छ। हो साना बच्चाले आफैँ ब्रस गर्न सक्दैनन्। त्यसैले तीन वर्षसम्म आमाले नै उनीहरूको दाँत सफा गरिदिनुपर्छ।
खानेकुरा चपाउनेदेखि सौन्दर्यमा समेत महत्त्वपूर्ण दाँत जोगाउन सचेत हुनुपर्छ। अति चिसो वा अति तातो खानेकुरा खानु हुँदैन। कडा वस्तुहरू दाँतले टोकेर फुटाल्ने बानी पनि गलत हो। दाँतको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। दिनमा कँतीमा दुईपटक माझ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। साना नानीहरूलाई पनि यो शिक्षा दिनुपर्छ। दाँतमा केही समस्या आउनेवित्तिकै सम्बन्धित चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।
अशिम सापकाेटासँगकाे कुराकानीमा आधारित
श्रेष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ हुन्